Ezinye iiMveliso zoMdaka
Intambo yezixhobo zeGym
Ukuphazamisa ubungqina boTywina lweCandelo
Ukuqaliswa kwemveliso entsha
Uluhlu olubanzi lokusetyenziswa elubala intambo yesinyithi yocingo lwentsimbi
Intambo yentsimbi eyenziwe ngocingo lweplastikhi ikwabizwa ngokuba yicingo elibotshwe ngeplastikhi, ucingo olugqunywe nge-PVC, ucingo olugqunywe nge-PE, ucingo olutywinwe nge-PVC, kunye nocingo olu-PE. Intsimbi yentsimbi kwalenza idityaniswe ngokuqinileyo ndawonye, ​​ineempawu anti-ukwaluphala, anti-umhlwa, kunye anti-nokuqhekeka. Ubomi benkonzo buninzi ...
Imbali yentsimbi yocingo lwentambo
Imbali yentambo yocingo yentambo njengoko sisazi ukuba yaqanjwa kwiminyaka engaphantsi kwama-200 eyadlulayo, phakathi kowe-1831 nowe-1834. Ngelo xesha, injongo yayikukwenza intambo yomelele ngokwaneleyo ukuxhasa umsebenzi kwimigodi yeeNtaba zeHarz. Ingeniswe nguWilhelm Albert, injineli yezemigodi yaseJamani, le ntambo yocingo ine ...
Isantya sokutsiba intambo-Aluminium ingxubevange yokubamba intambo yokutsiba ngentambo
Nceda uphucule ii-unders zakho eziphindwe kabini kwaye uncede abo sikhuphisana nabo ukuba bafike kwinqanaba elilandelayo: kathathu ngaphantsi. Iibhola zethu zokuqhubela phambili zivumela ukukhawuleza okukhawulezayo Ufumana ukulungelelana okugqibeleleyo okwenza kube lula kubantu abadala nakwishumi elivisayo. Iyamelana ne-tangle ukuze ukwazi ukusebenza ngokukhawuleza njengoko ufuna ngaphandle kwe ...
Ukhetho kwezemidlalo oluphambili- intambo yokutsiba ngaphandle kwentambo
Izinto eziluncedo zokubaleka ngentambo yokutsiba ngaphandle kwentambo: 1. Ingenziwa kwindawo encinci 2. Ayizukubetha okanye ikhubeke okanye uzenzakalise ngengozi 3. Akukho kungqubana phakathi kwentambo nomhlaba, kwaye akuphazamisi abantu Ukusetyenziswa okunokubalwa nokubala ...
Kutheni ukhetha intambo yokutsiba intambo?
Masithelekise intambo zokutsiba eziqhelekileyo kwintengiso. 1. Intambo yokutsiba ngeplastiki Intambo yeplastiki ayibizi kangako kuzo zonke iintambo zokutsiba, kwaye ikomelele noko, akukho lula ukuba iqhina, kwaye ayibizi mali ingako, kodwa ubunzima bunzima kakhulu, bulungele abaqalayo kuphela. 2. Ukutsiba umqhaphu ...
Uyikhetha njani intambo yokutsiba?
Uyikhetha njani intambo yokutsiba? 1. Jonga izinto ezibonakalayo Intambo ethambileyo ikhuselekile noko kwaye ilungele ukutsiba kancinci. Ucingo lwentsimbi okanye iintambo zenylon azilungelanga abantu abaqhelekileyo. Iiplastiki kunye neentsontelo zerabha zinobunzima obuthile, ke zilungele ukukhutshwa ngokukhawuleza ...
Elona qabane lilungileyo lokulahleka kobunzima kunye nokwenza umzimba-hula hoop
Isisindo sokuLolonga umzimba somzimba 8 Icandelo elinokuqhelaniswa lokuzivocavoca, iHolo yoPhuculo oluHambisekayo lwezeMidlalo enesisindo sabafazi Ukuphulukana nobunzima, ukuzivocavoca ISUPER SOFT I-FOAM EFANELEKILEYO-Isisindo sokuzilolonga senziwe ngogwebu oluphezulu olwenza ukuba lube lula ngakumbi. I-foam ethambileyo ilingana ngokufanelekileyo nesinqe sakho ...
Ukuqaliswa kwemveliso entsha: Intambo yokuThengisa okuThengisa kakhulu
Kutshanje sisungule ibhetshi yokutsiba ngentambo, siyabathengisa ngexabiso lefektri elifikelelekayo. Sikhethe izitayile zokuthengisa ezishushu zaseAmazon. Masazise iimveliso ezintsha. 1.Ukuphathwa kweGwebu ngefowuni Ukuthwala isantya sokutsiba ngentambo malunga nale nto Inzima kwaye yomelele- ukusetyenziswa kwezinto ezinzima kakhulu ...
Imigaqo engamashumi amabini anesine yelanga yoMthendeleko weQingming.
Umnyhadala weQing Ming ngumnyhadala wemveli waseTshayina, unembali yamawaka amabini anamakhulu amahlanu eminyaka; Eyona misebenzi iphambili yenkcubeko yile: ingcwaba, ukuphuma, ukubamba inkuku, ujingi, ukudlala imethi, ukutsala umlobothi, ukutsala umlo), njl.njl. Usuku lokutshayela ingcwaba, njengesiko ...
Isikhumbuzi sokuFudumala seBangyi -Ukhuseleko lokusetyenziswa kwentambo yocingo lwentsimbi
(1) Jonga ngaphambi kokusetyenziswa kwendawo yokuHlola: Jonga intambo yentsimbi yentsimbi ukunxiba, ukubola, ukuzolula, ukugoba, ukujika, ukudinwa, ucingo olaphukileyo, kunye nenqanaba lokuvezwa kwentambo ukumisela ubunzima bayo bokuphakamisa ngokukhuselekileyo (kubandakanya ne-scrap). ...
Ngezixhobo ezigqwesileyo kunye netekhnoloji yokuqala, u-Bangyi usungule iintambo zentsimbi zechungechunge ezi-3: (1) Intambo yocingo yentsimbi ebunjiweyo Yamkela i-qua ephezulu ...
Umsebenzi weQela lokwakha iqela laseBangyi - Umlilo oshushu ebusika obubandayo
Akukho nto inokuyifudumeza intliziyo njenge-BBQ ebusika ebandayo! Ukuqinisa ngakumbi umanyano phakathi kwamaqela kunye nokwenza umanyano nentsebenziswano phakathi kwamaqela, nge-21 kaNovemba, 2020, uBangyi waququzelela umsebenzi wokwakha iqela kwingingqi yeentaba ...
Idilesi: Xujiadaokou Village Shuiwan Town, Wudi County, Binzhou City, kwiPhondo Shandong
Umthengisi wentsimbi ecwangciswe ngesinyithi, Isefu Strand Factory, Umthengisi weNtambo yecingo kwalenza, PVC Camera Isefu Steel Intambo, Electro Isefu Iron Wire, Umthengisi weNtambo yoQinizelelo,